प्राय: सोधिने प्रश्नहरू - आला अनलाइन ट्राफिक
मैले तपाईका बारेमा कहिल्यै सुन्न पाइनँ, संसारमा तिमी को हौ?
अन्ततः तपाइँको परिचय बनाउन खुशी! आला अनलाइन ट्राफिक एक प्रमाणित वेबसाइट यातायात आपूर्तिकर्ता हो जसले यसका ग्राहकहरूलाई १००% वास्तविक मानव आगन्तुकहरू प्रदान गर्दछ। कम्पनीले साझेदारहरूको उनीहरूको विश्वसनीय नेटवर्कको साथ काम गर्दछ जुन उच्च गुणवत्ताको मानव यातायात प्रदान गर्दछ र सुनिश्चित गर्दछ कि हरेक अभियान प्राथमिकतामा छ। हाम्रो टीमले शीर्ष प्रतिभालाई रोजगार दिन्छ, टेक र विज्ञापनमा सबैभन्दा ठूला नामहरूको साथ काम गर्ने व्यक्तिहरू सहित।
के तपाईहरू अश्‍लील / यौन खेलौना / जुवा / क्लिकब्याक स्वीकार गर्नुहुन्छ?
हामी पक्कै गर्छौं। हामी अन्तिम 10 बर्षदेखि वयस्क ट्राफिक प्रदान गर्दै छौं।
किन तपाईं आफूलाई उत्तम विज्ञापन छनौटको रूपमा लिनुहुन्छ?
अनलाइन विज्ञापन र डिजिटल मार्केटिंगमा 16 वर्षको अनुभवको साथ, आला अनलाइन ट्राफिक हजारौं अनलाइन कम्पनीहरू, मोबाइल विकासकर्ताहरू र एफिलियट मार्केटरहरू लेड लिन र भुक्तान गरिएको ट्राफिक मार्फत बिक्री बढाउन जान्छन्। वास्तवमा, कम्पनीले संसारको सबैभन्दा ठूलो ट्राफिक नेटवर्कहरू मध्ये एक संचालन गर्दछ, प्रत्येक दिन 100 मिलियन छाप र 50 मिलियन अनौंठो आगन्तुकहरू उत्पादन गर्दछ!
हामी केवल यातायात वितरण गर्दैनौं। हामी कोठा सम्बन्धित, लक्षित यातायात को रूपान्तरण गर्छौं कि रूपान्तरण को उच्च संभावना छ।
के म लक्षित ट्राफिक हुनेछ?
हो, तपाइँ लेजर लक्षित ट्राफिक प्राप्त गर्नुहुनेछ! एक पटक तपाईंको अनुरोध संसाधित भयो, तपाईंको वेबसाइट भ्रमण र एक अभियान टेक्निशियन द्वारा प्रत्येक अभियानको लागि मूल्यांकन गरिनेछ। यसले हामीलाई यसमा सही प्रकारको ट्राफिकलाई लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईले छनौट गर्नका लागि हामीले 1,000 भन्दा बढि कोटीहरूमा डोमेनहरूको समयावधि सक्यौं, त्यसोभए तपाईं जुनसुकै ठाउँको उद्योग हुनुभयो भन्ने कुरामा फरक पर्दैन, तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि हामी तपाईंलाई लक्षित गरिएको ट्राफिक दिन सक्षम हुनेछौं ताकि तपाईं मात्र रूचि प्राप्तकर्ताहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उत्पादन।
तपाईंको TAT के हो?
प्रशोधन समय लिन 3-4 दिन लाग्छ। यदि यो4दिन भन्दा लामो भयो र तपाईंले कुनै नयाँ आगन्तुकहरू देख्नुभएन भने, कृपया हाम्रो ग्राहक समर्थन ईमेल गर्नुहोस्, र हामी यसलाई तुरुन्तै हेर्नेछौं।
म कसरी ट्र्याक गर्ने?
हामी तपाईंलाई एक प्रत्यक्ष सार्वजनिक बिट ट्र्याकिंग लिंकको साथ प्रदान गर्दछौं। Bitly वर्ष र सार्वजनिक को लागी स्थापना गरीएको छ, त्यसैले सबै कुरा पारदर्शी छ।
के म बिक्रीको ग्यारेन्टी हुँ?
हामी बिक्री ग्यारेन्टी गर्दैनौं। कसैले पनि गर्न सक्दैन - फेसबुक हैन, गुगल हैन, लिन्कडिन छैन इत्यादि।
तर, हाम्रो ग्राहकहरु को आफ्नो बिक्री को रूप मा धेरै द्वारा देखेको छ WHN 800%, र ग्राहकहरूको बहुमतले हाम्रो सेवाबाट ठूलो फाइदा उठाएको छ।
त्यो भनियो, त्यहाँ धेरै बाह्य कारकहरू छन् जसले प्रदर्शनलाई असर गर्न सक्छ जस्तै अर्डर गरिएको ट्राफिकको मात्रा, तपाईंको वेबसाइटको सौन्दर्य, तपाईंको वेबसाइटको प्रयोगकर्ता अनुभव आदि।
Adsense र सम्बद्ध सुरक्षित?
100%। हामी त्यस्ता ग्राहकहरूको धेरै संख्यामा सेवा दिन्छौं।
के ट्राफिक देश निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ?
हो। हामीसँग लगभग सबै Tier 1 र Tier2देशहरू हाम्रो डाटाबेसमा छन्।
के म URL परिवर्तन गर्न सक्छु वा अभियानको बखत अन्य परिवर्तनहरू गर्न सक्छु?
एक पटक तपाईंको अभियान प्रशोधन भएपछि, तपाईंलाई तपाईंको URL परिवर्तन गर्न वा अन्य परिवर्तनहरू गर्न अनुमति दिदैन। कृपया नयाँ अर्डर गर्नुहोस् तपाईलाई नयाँ यूआरएलको लागि अभियान चाहिन्छ।
के तपाईले प्रदान गर्नुभएको ट्राफिक वास्तविक हो? वा तपाईं स्प्याम वा अन्य बेइमान प्राविधिक प्रयोग गरेर ट्राफिक उत्पन्न गर्नुहुन्छ?
हामी पठाउने यातायात वैध छ। हामी कहिले पनि सामूहिक ईमेलहरू वा समाचार समूहमा पोष्ट गर्दैनौं। हामी हाम्रो ग्राहकहरूको वेबसाइटहरूमा यातायात पुर्‍याउन नक्कली वा अनैतिक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दैनौं! आश्वासन दिनुहोस्, हामी पठाउने सबै यातायात 100% वास्तविक हो र वास्तविक वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरूबाट आउँदछ।
मलाई सुरु गर्न के चाहिन्छ?
तपाइँको वेबसाइट यूआरएल, कीवर्ड र तपाइँको को एक जोडी। हामी अरू सबै कुराको ख्याल राख्नेछौं
के मैले कुनै मार्केटिंग सामग्री उत्पादन गर्न वा सिर्जना गर्न छ?
केहि पनि होईन। हामी अरू सबै ह्यान्डल गर्दछौं।
लक्ष्यीकरण सर्तहरू के हुन्?
देश, आला र कीवर्ड द्वारा।
के सबै आगन्तुकहरू एकै समयमा वेबसाइटमा पुग्छन् जब तपाईं ट्राफिक लक्षित टार्फिक?
होइन, तिनीहरू जैविक रूपमा आउँछन्।
के मसँग अभियानको लागि धेरै यूआरएलहरू छन्?
एक प्याकेज प्रति अभियान सुरु भए पछि कुनै परिवर्तनहरू भएन।
तपाई प्रति दिन कति जना आगन्तुकहरुलाई पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ?
हामी हाम्रो नेटवर्कमा प्रत्येक दिन4मिलियन भन्दा बढी अनौंठो आगन्तुकहरू दिन्छौं यसको 70% संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटली, स्पेन आदिबाट हुने ट्राफिक हो। यदि तपाईंलाई पुग्न सक्ने ट्राफिक चाहिन्छ भने।
के तपाईको ट्राफिकलाई रिसाइकल गरिएको छ?
होईन, हरेक अभियान ताजा अभियान हो र हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि त्यहाँ कुनै नक्कल आईपीहरू छैनन्।
के म एक प्याकेजको लागि यूआरएलहरू विभाजित गर्न सक्छु?
होईन, एक यूआरएल केवल एक प्याकेजको लागि, र तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न जब अभियान सुरु भयो।